” ဗိုကျပူတာ ဘာကွောငျ့လဲ ….. ? – Nyi Ma Lay
” ဗိုကျပူတာ ဘာကွောငျ့လဲ ….. ?
လူအမြားစု ရဲ့အထငျက ဗိုကျပူတာဟာ ဝမျးဗိုကျမှာ အဆီတှေ စုပါမြားပွီး အဆီတှအေခေါကျတှေ ထူလာလို့ဖွဈရတာလို့ပဲ ထငျနကွေပါတယျ။ အဲဒါတဈခုတညျးကွောငျ့တော့ မဟုတျဘူး။ လူတှေ သတိမထားမိကွသေးတဲ့ အကွောငျးတဈခု ရှိနပေါသေးတယျ။
အဲဒါကတော့ အူမကွီးတှေ ကွီးမားတုတျ ခိုငျလှနျး နလေို့ ဗိုကျပူထှကျနကွေရခွငျး ပဲဖွဈပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ အသကျကွီးလာလို့ဗိုကျပူထှကျ လာကွရသူတှဟောအဲဒီ့အူမကွီးတှေ တုတျခိုငျကွီးမားလာလို့ဖွဈရတာ မြားပါတယျ။ အူ မကွီးတှေ ဘာကွောငျ့ ကွီးမားတုတျ ခိုငျလာကွရတာလဲ ။ဖွဈစဉျကတော့အနှဈနှဈအလလ အစားအစာတှကေိုစားလာခဲ့ရာကနေ ဖွဈလာရတာပါပဲ။
အစာစားလိုကျတဲ့ အခါမှာ အစာဟောငျးေ တှဟာအူမကွီးထဲကို ရောကျရှိပွီး အထိုငျခပြါတယျ။အဲဒီ အစာဟောငျးတှဟောရှကေို့မွနျမွနျတိုးပွီး မစငျအဖွဈခန်ဓာကိုယျပွငျပကို ထှကျသှားဖို့လိုပါတယျ။ သို့သျောလဲ လူက ရသေောကျနညျးခွ ငျးအမြှငျစာ စားတာနညျွး ခငျးလှုပျရှားမှု နညျးခွငျးတှကွေောငျ့အစာဟောငျးတှဟောရှကေို့ မွနျမွနျ မတိုးနိုငျကွဘူး။
အဲဒီ့အခါမှာ အူမကွီး အတှငျးနံရံတှမှော မစငျတှကေခြိုး(ဂြိုး)အဖွဈ ကပျကပျလာပါတယျ။ ဒီဖွဈစဉျမြိုးက အမွဲတနျးဖွ ဈလာရာကကွာတော့ အူမကွီးတှေ အလုံးတုတျတုတျလာပွီးဗိုကျကွီးက ပူထှကျလာတော့ တာပေါ့။ ထငျရှားတဲ့ ဥပမာနဲ့ ပွောရရငျ သံကောငျတှေ အမြားကွီးရှိတဲ့ ကလေးတှဗေိုကျပူနတေဲ့ ပုံစံမြိုးပါပဲ။
အမရေိကနျနိုငျငံက ဗိုကျအလှနျ ပူတဲ့လူ တဈယောကျသသှေားလို့ သူ့အလောငျးကိုခှဲစိ တျကွညျ့ကွပါတယျ။ ဗိုကျကို ခှဲလိုကျရာမှာသူ့ရဲ့အူမကွီးတှဟော အလှနျကိုကွီးမားတုတျခိုငျနတောကို တှကွေ့ပါတယျ။ အဲ ဒီအူမကွီးကို ခှဲလို ကျရာမှာတော့ေ ကွာကျစရာကောငျးလောကျေ အာငျနံစျောနတေဲ့ မစငျခြိုးတှေ ကပျနတောကိုတှရေ့တယျလို့ဆိုပါတယျ။ အနှဈနှဈအလလက
စုအောငျးလာတဲ့ မစငျခြိုးတှကွေောငျ့အူမကွီးတှေ တုတျခိုငျကွီးမားပွီးဗိုကျ ပူထှကျလွာ ခငျးဖွဈပါတယျ။
လူတဈယောကျ ရဲ့အူအရှညျဟာ၂၆ ပကေနေ ပေ ၃၀ လောကျအထိ ရှညျပါတယျ။အဲ့လောကျရှညျတဲ့ အူတှတေုတျခိုငျကွီးမားနတေော့ဝမျးဗိုကျကလညျး ပူထှကျလာတော့ တာပေါ့။ အူမကွီးတှမှောမစ ငျခြိုးတှေ မြားနခွေငျးဟာလူကိုရောဂါမြားစပွေီး အသကျလညျးတို တတျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုေ တာ့အဲဒီမစငျခြိုးတှကေနေ ထှကျလာတဲ့အဆိပျအတောကျတှဟော အူနံရံတှကေနေ ဝငျပွီးတဈ ကိုယျလုံးကို ပြံ့နှံ့ရောကျရှိပွီးရောဂါဖွဈစလေို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အဲဒီ မစငျခြိုးတှကေိုဖယျရှားရှ ငျးလငျးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ မစငျခြိုးတှကေို ဘယျလို ရှငျးလငျးဖယျ ရှားပဈရမလဲ။နိုငျငံခွားမှာတော့ဝမျးခြူတဲ့ စကျတှနေဲ့စအိုကနေ ဆေးရညျသှငျးပွီး ဖယျရှာွး ကပါတယျ။ ၇ကွိမျေ လာကျ ဝမျးခြူလိုကျပွီးနောကျ မှာမစငျခြိုးတှေ ရှငျးသှားပွီး ဗိုကျလညျးခြ ပျနလေို့ထိုငျလို့လညျး ကောငျးသှား ကွတယျလို့ဆိုပါတယျ။ ကနြျောတို့ တိုငျးပွညျမှာတော့ အဲ့ဒီ့လောကျ ခတျေမမှီသေးဘူး ဒါကွောငျ့မွနျမာ့နညျးမွနျ မာ့ဟနျနဲ့ပဲလုပျကွတာပေါ့။
မွနျမာတှေ အလှနျနှဈသကျတဲ့ဟ ငျးအမယျေ တှရှိပါတယျ။ အဲဒီ့ထဲမှာ ထမငျးကို အလှနျမွိနျစတေ တျတဲ့ ကငျပှနျးခညျြကို မကွိုကျသူ မရှိသလောကျပါပဲ။ကွျောခကျြအဖွဈ၎င်းငျး ဟငျးခြိုအဖွဈ၎င်းငျးခကျြစား ကွပါတယျ။ ကငျပှနျးသီး ကိုလညျးတရျောနဲ့ တှဲပွီးခေါငျးလြှျောကွပါတယျ။က ငျပှနျးပငျဟာ ဆပျပွာကဲ့သို့ဆေးကွောေ ပးနိုငျတဲ့ အာနိသငျရှိပါတယျ။
ကငျပှနျးခဉျြရှကျ ကို ဟငျးခြိုအဖွဈအ ရသာရှိအောငျ ခပျပဈြပဈြခကျြ ပွီးနလေ့ယျ ထမငျးစားခြိနျမှာ ထမငျးနဲ့အတူအားရပါးရစားပါသောကျပါ။တဈပနျးကနျလုံး ကုနျအောငျသော ကျပဈလိုကျပေါ့။ အဲဒီကငျပှနျးခဉျြက အူမကွီးထဲရောကျရငျ မစငျခြိုးတှကေို နှူးပေး ပါလိမျ့မယျ။ရှကေ့ဆပျပွာနဲ့ နှူးထားပွီးရငျ နောကျက တံမွကျစညျးနဲ့လှဲပွီးသနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးရပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ညေ နဘကျမှာ အမြှငျဓါတျွ ကှယျဝတဲ့ဂေါရခါးညှနျ့လို အရှကျအညှ နျ့တှဗေိုကျဝတဲ့ အထိ ကွျောစားပေးပါ။ ညအိပျယာမဝငျခငျ ပနျးသီးတဈလုံးစားပွီးအိပျလိုကျပါ။အူတှေ လှိုငျးထအော ငျညနဘေကျမှာ လမျးလြှောကျ ထှကျပေးပွီးရမြေားမြားေ သာကျဖို့လညျး လိုပါတယျ။ အဲ……နောကျနေ့ မနကျမှာတော့တ ကှီကှီတစီစီနဲ့ E ပါပွီး အူမကွီးထဲကမစငျခြိုးတှေ အကြိအခြှဲတှေ အရိအရှဲတှထှေကျ ကလြာလိမျ့မယျ။
ဝမျးခိုငျတဲ့ သူတှေ ကတော့ ဝမျးနူးပါလိမျ့မယျ။ တဈပတျတဈခါလောကျ ပုံမှနျလေးလု ပျပေးရငျ၁ နှဈလောကျအကွာ မှာသိသိသာသာ ဗိုကျခပျြပါတယျ။နလေို့လညျး ကောငျးသှားလိမျ့မယျ။ အသကျကွီးလာ လို့ ဗိုကျပူလာပွီး အစားလြှော့ပမေဲ့ ဗိုကျမခပျြသူမြားဒီ နညျးကို စမျးကွညျ့နိုငျပါတယျ။
ဗိုကျလေးခပျြမှလညျး ကွညျ့ကောငျးတာ မဟုတျလား……………Crd#
လူအများစု ရဲ့အထင်က ဗိုက်ပူတာဟာ ဝမ်းဗိုက်မှာ အဆီတွေ စုပါများပြီး အဆီတွေအခေါက်တွေ ထူလာလို့ဖြစ်ရတာလို့ပဲ ထင်နေကြပါတယ်။ အဲဒါတစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်ဘူး။ လူတွေ သတိမထားမိကြသေးတဲ့ အကြောင်းတစ်ခု ရှိနေပါသေးတယ်။
အဲဒါကတော့ အူမကြီးတွေ ကြီးမားတုတ် ခိုင်လွန်း နေလို့ ဗိုက်ပူထွက်နေကြရခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးလာလို့ဗိုက်ပူထွက် လာကြရသူတွေဟာအဲဒီ့အူမကြီးတွေ တုတ်ခိုင်ကြီးမားလာလို့ဖြစ်ရတာ များပါတယ်။ အူ မကြီးတွေ ဘာကြောင့် ကြီးမားတုတ် ခိုင်လာကြရတာလဲ ။ဖြစ်စဉ်ကတော့အနှစ်နှစ်အလလ အစားအစာတွေကိုစားလာခဲ့ရာကနေ ဖြစ်လာရတာပါပဲ။
အစာစားလိုက်တဲ့ အခါမှာ အစာဟောင်းေ တွဟာအူမကြီးထဲကို ရောက်ရှိပြီး အထိုင်ချပါတယ်။အဲဒီ အစာဟောင်းတွေဟာရှေ့ကိုမြန်မြန်တိုးပြီး မစင်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပကို ထွက်သွားဖို့လိုပါတယ်။ သို့သော်လဲ လူက ရေသောက်နည်းခြ င်းအမျှင်စာ စားတာနည်ြး ခင်းလှုပ်ရှားမှု နည်းခြင်းတွေကြောင့်အစာဟောင်းတွေဟာရှေ့ကို မြန်မြန် မတိုးနိုင်ကြဘူး။
အဲဒီ့အခါမှာ အူမကြီး အတွင်းနံရံတွေမှာ မစင်တွေကချိုး(ဂျိုး)အဖြစ် ကပ်ကပ်လာပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးက အမြဲတန်းဖြ စ်လာရာကကြာတော့ အူမကြီးတွေ အလုံးတုတ်တုတ်လာပြီးဗိုက်ကြီးက ပူထွက်လာတော့ တာပေါ့။ ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာနဲ့ ပြောရရင် သံကောင်တွေ အများကြီးရှိတဲ့ ကလေးတွေဗိုက်ပူနေတဲ့ ပုံစံမျိုးပါပဲ။
အမေရိကန်နိုင်ငံက ဗိုက်အလွန် ပူတဲ့လူ တစ်ယောက်သေသွားလို့ သူ့အလောင်းကိုခွဲစိ တ်ကြည့်ကြပါတယ်။ ဗိုက်ကို ခွဲလိုက်ရာမှာသူ့ရဲ့အူမကြီးတွေဟာ အလွန်ကိုကြီးမားတုတ်ခိုင်နေတာကို တွေ့ကြပါတယ်။ အဲ ဒီအူမကြီးကို ခွဲလို က်ရာမှာတော့ေ ကြာက်စရာကောင်းလောက်ေ အာင်နံစော်နေတဲ့ မစင်ချိုးတွေ ကပ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အနှစ်နှစ်အလလက
စုအောင်းလာတဲ့ မစင်ချိုးတွေကြောင့်အူမကြီးတွေ တုတ်ခိုင်ကြီးမားပြီးဗိုက် ပူထွက်လြာ ခင်းဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက် ရဲ့အူအရှည်ဟာ၂၆ ပေကနေ ပေ ၃၀ လောက်အထိ ရှည်ပါတယ်။အဲ့လောက်ရှည်တဲ့ အူတွေတုတ်ခိုင်ကြီးမားနေတော့ဝမ်းဗိုက်ကလည်း ပူထွက်လာတော့ တာပေါ့။ အူမကြီးတွေမှာမစ င်ချိုးတွေ များနေခြင်းဟာလူကိုရောဂါများစေပြီး အသက်လည်းတို တတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုေ တာ့အဲဒီမစင်ချိုးတွေကနေ ထွက်လာတဲ့အဆိပ်အတောက်တွေဟာ အူနံရံတွေကနေ ဝင်ပြီးတစ် ကိုယ်လုံးကို ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိပြီးရောဂါဖြစ်စေလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဲဒီ မစင်ချိုးတွေကိုဖယ်ရှားရှ င်းလင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မစင်ချိုးတွေကို ဘယ်လို ရှင်းလင်းဖယ် ရှားပစ်ရမလဲ။နိုင်ငံခြားမှာတော့ဝမ်းချူတဲ့ စက်တွေနဲ့စအိုကနေ ဆေးရည်သွင်းပြီး ဖယ်ရှာြး ကပါတယ်။ ၇ကြိမ်ေ လာက် ဝမ်းချူလိုက်ပြီးနောက် မှာမစင်ချိုးတွေ ရှင်းသွားပြီး ဗိုက်လည်းချ ပ်နေလို့ထိုင်လို့လည်း ကောင်းသွား ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာတော့ အဲ့ဒီ့လောက် ခေတ်မမှီသေးဘူး ဒါကြောင့်မြန်မာ့နည်းမြန် မာ့ဟန်နဲ့ပဲလုပ်ကြတာပေါ့။
မြန်မာတွေ အလွန်နှစ်သက်တဲ့ဟ င်းအမယ်ေ တွရှိပါတယ်။ အဲဒီ့ထဲမှာ ထမင်းကို အလွန်မြိန်စေတ တ်တဲ့ ကင်ပွန်းချည်ကို မကြိုက်သူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ကြော်ချက်အဖြစ်၎င်း ဟင်းချိုအဖြစ်၎င်းချက်စား ကြပါတယ်။ ကင်ပွန်းသီး ကိုလည်းတရော်နဲ့ တွဲပြီးခေါင်းလျှော်ကြပါတယ်။က င်ပွန်းပင်ဟာ ဆပ်ပြာကဲ့သို့ဆေးကြောေ ပးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။
ကင်ပွန်းချဉ်ရွက် ကို ဟင်းချိုအဖြစ်အ ရသာရှိအောင် ခပ်ပျစ်ပျစ်ချက် ပြီးနေ့လယ် ထမင်းစားချိန်မှာ ထမင်းနဲ့အတူအားရပါးရစားပါသောက်ပါ။တစ်ပန်းကန်လုံး ကုန်အောင်သော က်ပစ်လိုက်ပေါ့။ အဲဒီကင်ပွန်းချဉ်က အူမကြီးထဲရောက်ရင် မစင်ချိုးတွေကို နှူးပေး ပါလိမ့်မယ်။ရှေ့ကဆပ်ပြာနဲ့ နှူးထားပြီးရင် နောက်က တံမြက်စည်းနဲ့လှဲပြီးသန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးရပါတယ်။
ဒါကြောင့်ညေ နဘက်မှာ အမျှင်ဓါတ်ြ ကွယ်ဝတဲ့ဂေါရခါးညွန့်လို အရွက်အညွ န့်တွေဗိုက်ဝတဲ့ အထိ ကြော်စားပေးပါ။ ညအိပ်ယာမဝင်ခင် ပန်းသီးတစ်လုံးစားပြီးအိပ်လိုက်ပါ။အူတွေ လှိုင်းထအော င်ညနေဘက်မှာ လမ်းလျှောက် ထွက်ပေးပြီးရေများများေ သာက်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ အဲ……နောက်နေ့ မနက်မှာတော့တ ကွီကွီတစီစီနဲ့ E ပါပြီး အူမကြီးထဲကမစင်ချိုးတွေ အကျိအချွဲတွေ အရိအရွဲတွေထွက် ကျလာလိမ့်မယ်။
ဝမ်းခိုင်တဲ့ သူတွေ ကတော့ ဝမ်းနူးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက် ပုံမှန်လေးလု ပ်ပေးရင်၁ နှစ်လောက်အကြာ မှာသိသိသာသာ ဗိုက်ချပ်ပါတယ်။နေလို့လည်း ကောင်းသွားလိမ့်မယ်။ အသက်ကြီးလာ လို့ ဗိုက်ပူလာပြီး အစားလျှော့ပေမဲ့ ဗိုက်မချပ်သူများဒီ နည်းကို စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဗိုက်လေးချပ်မှလည်း ကြည့်ကောင်းတာ မဟုတ်လား……………Crd#
Previous post သီတငျးကြှတျ ကာလ မှာ မိဘဘိုးဘှား တှကေို ဘာကွောငျ့ ကနျတော့ကွရမှာလဲ လို့ မေးနသေူမြားအတှကျ
Next post မဖွဈမနသေိထားသငျ့တဲ့ ကွကျဥ ကို ပွုတျစားကွျောစားတာတှတေငျမကပဲ လူသိနညျးတဲ့ အခွား အသုံးဝငျပုံမြား